Majalladda Time ayaa Suxufiyiin ku sharaftay iney yihiin shakhsiyaadka sannadka 2018-ka - BBC News Somali
Majalladda Time ayaa Suxufiyiin ku sharaftay iney yihiin shakhsiyaadka sannadka 2018-ka
Lahaanshaha sawirka TIME
Image caption Jaldiga Majalladda Time oo ay ka muuqdaan Jamaal Khaashuqji iyo shaqaalaha wargeyska Capital Gazette
Afar ka mid ah bogagga jaldiga ah ee Majalladda Time ayaa lagu soo xardhay sawirrada suxufiyiin ka soo kala jeedda caalamka.
Jamaal Khaashuqji, oo horraantii bishii Oktoobar lagu dilay Qunsuliyadda Sucuudiga ee magaalada Istambuul ee dalka Turkiga ayaa sawirkiisa kaligiis lagu muujiyay mid ka mid ah jaldiyada Majalladda, halka shaqaalaha wargeyska Capital Gazette, oo ahaa wargeysii Mareykanka ee sannadkan lagu dilay 4-ta wariye, lagu muujiyay bog kale.
Image caption Jamaal Khaashuqji wuxuu maqaallo ku qori jiray wargeyska Washington Post
Nin loo maxakamadeeyay inuu u hanjabay wariyeyaal dhaliilay Trump
Weriyeyaal Turki ah o dammaanad lagu sii daayay
Sawirrada suxufiyiinta kala ah Maria Ressa, Wa Lone iyo Kyaw Soe Oo ayaa sidoo kale ka soo muuqday labada bog ee ugu dambeysa.
Image caption Maria Ressa waxay bishan tagtay maxkamad looga yeeray
Ms Ressa ayaa tifaftire ka ah bogga internet-ka ee Rappler, oo ka howl gala dalka Philippines, isla markaana dhaleeceeya hannaanka ay xukuumadda wax ku maamusho.
Wa Lone iyo Kyaw Soe Oo ayaa iyaguna ah wariyeyaal ka tirsan wakaaladda wararka ee Reuters, kuwaasoo lagu xiray dalka Myanmar, xilli ay baaritaan qarsoon ku sameynayeen xasuuqa la sheegay in loo geystay Muslimiinta qoomiyadda Rohingya.
Image caption Kyaw Soe Oo (bidix) iyo Wa Lone waxay sheegeen ineysan wax khalad ah sameyn
Dhammaan suxufiyiintan ayaa la sheegay iney sannadkan u muteysteen dil ama xarig sababo la xiriira xuquuqda dadka kale ee ay u doodayeen.
Sida ay sheegtay Majalladda Time, waxaa lagu soo xushay khatartii ay ugu bareereen iney soo bandhigaan runta qarsooneyd, iyo sida ay ugu hadlayeen dadka aan awoodda u lahayn iney xaqooda ka hadlaan.
Sannadkii la soo dhaafay, Majalladdan ayaa "sakhsiga sannadka" u magacowday dad ay ku tilmaantay "Soo afjareyaasha aamusnaanta", kuwaasoo ahaa haween iyo rag ka qeylo dhaamiyay tacaddiyada galmada ee ka dhaca dunida.